Kenya: KDF oo dejisay qorshaha ay ciidamadeeda uga baxayaan Soomaaliya – Radio Damal
Kenya: KDF oo dejisay qorshaha ay ciidamadeeda uga baxayaan Soomaaliya
Waaxda gaashaan dhigga ee dalka kenya (KDF) ayaa dejisay geedisocodka loo maraya iyo waxyaabaha lagu saleynaya in ciidamada difaaca ay kaga soo baxaan gudaha dalka Soomaaliya.
Ciidamada ayaa Soomaaliya ka howlgeliyay tan iyo sanandkii 2011-kii.
Wadamada ay Kenya ka mid tahay oo ay saraakiishooda xubnaha ka yihiin howlgalka nabad sugidda ee midowga Afrika ee (Amisom) ayaa lagu wadaa inay Soomaaliya isaga soo tagaan bisha 12-aad ee sannadka 2021-ka.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa gudaha dalka ayaa ku warramaya in qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya ee KDF lagu qroray buug dhawaan la soo bandhigay.
Buuggan ayaa loogu magacdaray “War for Peace” oo loola jeedo dagaal nabad lagu raadinaya.
Waxaa uu eegaya howlgalladii militariga Kenya ay gudaha soomaaliya ka fulinayeen 2011- ilaa 2020.
Jimcihii la soo dhaafay ayay ahayd markii Samson Mwathethe oo dhawaan wareejiyay xilka taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka uu buuggan soo bandhigay.
Tiirarka qorshaha waxaa ugu horreeya in la abuuro jawi deggan oo ay ciidamada AMISOM uga bixi karaan gudaha Soomaaliya iyadoo dib u habeyn lagu sameynaya ciidanka qalabka sida sido kalena saraakiisha amniga ee Soomaaliya fursad loo siinaya inay howlgallada hoggaamiyaan si loo helo nabad waarta.
Tiirka labaad ayaa ah in aagga Jubbaland laga dhigo mid nabdoon oo aynan Al-Shabaab ku sugneyn.
Waxay tani micnaheedu tahay in si buuxda loo xoreeyo meel kasta oo ay Al-Shabaab ka joogaan soomaaliya si aynan Kenya uga soo gudbin sida degmada Jilib, waddooyinka xiriiriya xuduudda Kenya sida Liboi, Ceel-waaq , Mandera, Gherilley keynta Boni, Ras Kamboni, Kuday, Kismayu iyo Barawe.
Sido kale waxaa qorshaha qeyb ka ah in la heshiisiiyo maamulka dowlad gobolkeedka Jubbaland iyo dowladda federaalka.
Qorshaha qeybtiisa saddexaad ayaa dhigaya inuu jiro nidaam ballaaran oo lagu maareyn karo xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya.
Sido kale waxaa buugga lagu soo jeediyay in xarumaha waaxda socdaalka laga furo meelaha xadka ah ee looga soo gudbo Kenya ee dhanka Mandera, El-Wak, Gherilley, Liboi, Kulbiyoow iyo Kiunga.
Tiirka afaraad ayaa ah in la xoojiyo howlgallada maamullada iskudhafka ah iyo xarumaha taliska dhexe ee Nairobi, Mombasa, Wajeer, Moyale, Busia, Namanga, Lamu iyo Lokichoggio.
Waxaa tani qeyb ka ah in sare loo qaado howlaha amni sugidda iyo sirdoonka.
Sido kale waxaa jiro tiir shanaad oo dhigaya in iyadoo la iskaashanaya la xoojiyo heshiiska Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku aaddan inay ka wada shaqeeyaan danaha iyo qorshayaasha amni ee ay wadagaan.
Tiirka ugu dambeeya ee ku saabsan qorshaha ciidamada difaaca dalka ee KDF ay kaga soo baxayaan Soomaaliya ayaa ah in laga hor tago xagjirnimada iyadoo la kaashanaya sido kalena la wacyigelinaya bulshada.
Tani ayaa lagu bartilmaameedsanaya dhalinyarada, haweenka iyo hay’adaha diimeed.
31-dii bishii shanaad ee sannadkii hore ayaa qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa loogu dhawaaqay inay soo baxaan dhammaan ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha soomaaliya.
Hasa ahaate AMISOM ayaa codsatay in isbeddel lagu sameeyo jadwadka ka bixitaanka Soomaaliya.